Serchen: Yako Cloud App Ratings uye Ongororo Saiti | Martech Zone
The Serchen pamusika masevhisi anopfuura zviuru gumi vatengesi uye mamirioni evatengi gore rega. Chinangwa chavo ndechekugadzira dhatabhesi rakakura rezviyero uye wongororo dzinozobatanidza vatengi nevatengesi neakanakisa masevhisi emakore uye software muIaaS, PaaS uye SaaS zvikamu.
IaaS - Zvivakwa seSevhisi muenzaniso wekupihwa umo sangano rinoburitsa zvishandiso zvinoshandiswa kutsigira mashandiro, kusanganisira kuchengetedza, Hardware, maseva uye zvikamu zve network. Mubatsiri webasa ndiye muridzi wemidziyo uye anoona nezve dzimba, kumhanya nekuichengeta. Mutengi anowanzobhadhara pane yega-yekushandisa hwaro.
SaaS - Software somunhu Service ndeye software yekuparadzira modhi umo kunyorera kunoitirwa nemutengesi kana mupi webasa uye kunowanikwa kune vatengi pamusoro penetiweki, kazhinji Internet.
PaaS - Puratifomu seShumiro inzira yekurenda Hardware, masystem anoshanda, chengetedzo uye network network pamusoro peInternet. Iyo modhi yekuendesa sevhisi inobvumidza mutengi kukwereka maseva akaenzana uye masevhisi akabatana ekumhanyisa mashandisiro aripo kana kugadzira uye kuyedza matsva.
Iyo saiti yakarongedzwa zvakanaka, yakakamurwa kuita mapuratifomu zvakanaka… uye ine yakanyatso tsvaga yekutsvaga bar yekutsvaga mapuratifomu aunoda. Ini ndinofunga kuchine toni yemapurogiramu asipo (hongu, hatina maapp ese akaunzwa pano parizvino, kungave… izvo zvichave zvisingakwanisike) uye ongororo hadzina kudzika panguva ino; zvisinei, idanho rakakura munzira kwayo yekuvaka dhatabhesi seiyi!
Sign up pa Serchen uye wongorora maficha aunoda - uye uwane zvakanyanya!
Tsanangudzo kubva TsvagaCloudComputing.
Tags: gore ongororogore software ongororohongukushambadzira tekinoroji wongororopaaschikuva wongorororatingsReviewssaasserchen